GOD | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
ဟော့ကင်းနှင့်အင်တာဗျုး အပိုင်း(၃) မေး။ ။ဆရာက သိပ္ပံပညာရှင်ဆိုတော့ စဉ်းစားဆင်ခြင် ထိုးထွင်းမှုဆိုတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကိုတော့ ထည့်သွင်းစဉ်းစား လက်ခံလေ့ရှိပါသလား?? ဖြေ။ ။ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်၊ စဉ်းစားဆင်ခြင် ထိုးထွင်းမှုကို လက်ခံပါတယ်။ ကျွန်တော့် ဘဝမှာ သူဟာလည်း တော်တော်အရေးပါ အရာရောက်တာပဲ။ တစ်ခုရှိတာက ကျွန်တော်က သူတို့ကို သက်သေပြဖို့ ကြိုးစားတယ်ဈ ဒါပါပဲ။ ပြောရရင်တော့ (I rely on intuitionagreat deal.. .. but I have to … Continue reading →
Posted in Articles	| Tagged BLACK HOLE, Black Holes, GOD, Stephen Hawking, စတီဖင်ဟော့ကင်း	| Leaveacomment
ဟော့ကင်းနှင့်အင်တာဗျုး အပိုင်း(၁) သိပ္ပံပညာရှင်ကြီး စတီဖင်ဟော့ကင်း (Stephen Hawking) ကို (Sue) က မေးမြန်းခဲ့ဖူးသည်။ ယင်းအမေးအဖြေများသည် ယခုထက်တိုင် စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းသဖြင့်၊ ယင်း အမေးအဖြေများ အပါအဝင် ဟော့ကင်း၏ သဘောသဘာဝများ၊ စကြဝဠာ အပေါ်မှာထားရှိသော အယူအဆများကို သိသာပုံပေါ်စေရန် လက်လှမ်းမီသမျှ စုစည်း၍ တစ်စုတစ်စည်းတည်း ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ မေး။ ။ဆရာကြီး စတီဖင် ကိုယ့်ရောဂါနှင့်ကိုယ် ဖြစ်နေသဖြင့် လောကကြီးနှင့် အဆက်ပြတ်ခြင်းကို ခံနေရသလို ဖြစ်ပါသလား?? အထီးကျန်ဘဝ ခံစားချက်မျိုးများ … Continue reading →
Posted in Articles	| Tagged Black Holes, GOD, Stephen Hawking	| Leaveacomment
သိပ္ပံပညာထဲကဘ၀တစ်ခု – 08
Posted on February 25, 2011 by chitnge
သိပ္ပံပညာထဲကဘ၀တစ်ခု – 08 ဆက်လက်ဖော်ပြရမယ် ဆိုရင်တော့ – အိုင်းစတိုင်းဟာ ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ်ရဲ့ တိုးတက်လာပုံကို ကြည့်ပြီးတော့ တော်တော်လေး စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ်ဟာ လက်တွေ့ သုတေသန စမ်းသပ်ခန်းမှ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အဖြေဖြစ်လို့ သူ အရမ်း လေးစားပေမယ့်လည်း မသေချာခြင်းနိယာမရဲ့ သဘောအရ – အရာရာဟာ မသေချာဘူးလို့ ပြောဆိုရတဲ့ အဆိုပြုချက်ဟာ သိပ္ပံနယ်ပယ်မှာ ၀င်ရောက် ထိုးဖောက်လာတာကို သူဟာ စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ လက်ခံရတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဖြစ်ရပ်တွေကတော့ မသေချာခြင်းနိယာမရဲ့ ကြိုတင်ပြော ဟောကိန်းထုတ်တဲ့ … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged BLACK HOLE, Buddhism and Science, GOD, Leaps, Myanmar Posts, ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ်, စကြာဝဠာ, ဟော့ကင်း	| Leaveacomment
သိပ္ပံပညာထဲက ဘ၀တစ်ခု (သို့) စတီဖင်ဟော့ကင်း 07
သိပ္ပံပညာထဲက ဘ၀တစ်ခု (သို့) စတီဖင်ဟော့ကင်း 07 ဟော့ကင်းက သူ့ရဲ့ BLACK HOLE စာအုပ် အခန်း(၈)မှာ အိုင်းစတိုင်းအကြောင်း နည်းနည်း ရေးထားပါတယ်။ ရူပဗေဒပညာရပ်ဟာ သီအိုရီကြီး နှစ်ခုနဲ့ တည်ဆောက်ခဲ့တယ် – The two theories are the general theory of relativity and quantum mechanics. (Page-69) ဒီသီအိုရီကြီး နှစ်ခုဟာ အထွေထွေနှိုင်းရသီအိုရီ နဲ့ ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ်သီအိုရီ များပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Tags: … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science, Frontpage	| Tagged BLACK HOLE, Buddhism and Science, GOD, Myanmar Posts, ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ်, အထွေထွေနှိုင်းရသီအိုရီ	| Leaveacomment